Xildhibaanada barlamanka oo ka hadlay kala diristii guddiga maaliyadda BF - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaanada barlamanka oo ka hadlay kala diristii guddiga maaliyadda BF
Xildhibaanada barlamanka oo ka hadlay kala diristii guddiga maaliyadda BF
Muqdisho (Caasimada Online) – Qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ee ku kala aragti duwan xiisadda cusub ee ka dhex taagan guddoonka baarlamaanka ayaa ka hadlay eedaha loo jeediyay guddoonka baarlamaanka.
Khilaafka u dhaxeeya xildhibaanada baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka ayaa sababay in muddo labo maalin ah ay baaqdaan kulamadii caadiga ahaa ee ka dhici lahaa golaha shacabka.
Xildhibaan C/fataax Daahir Ismaaciil ayaa sheegay in hanaankii ugu dambeeyay ee shirka baarlamaanka uu u maamulay Guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ay keentay khilaafka iyo xiisadda cusub ee ka dhex jirta baarlamaanka.
“Sabtidii Qaabkii uu u hogaaminayay oo aheyd sida arday iskuul oo kale, ayaa ciladda keentay, dowladda waxay ku amaanan tahay waan ku amaaneynaa, laakiin waa inaan ka qabanaa waxay ku liidato”ayuu yiri xildhibaanka.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, oo kamid ah xildhibaanada taageersan xukuumadda ayaa sheegay in khilaafka cusub uu niyad ku abuuri karo shacabka, waxaana baarlamaanka horyaala shaqooyin muhiim ah.
Baaqashada kulan walbaa oo baarlamaanka yeelan lahaa ayaa la sheegay inay dhibaato ku tahay dowladda Soomaaliya oo shaqooyin badan ay horyaalaan, waxaana baarlamaanka laga doonayaa meel marin sharciyo badan oo doorashada xigta muhiim u ah.